Meritor idaacadaha, Qaybo ka bedel, Kits, Manuals & More
Waxaan bixinaa line buuxda Meritor idaacadaha iyo qaybo ka mid. Wac mid ka mid ah farsamo khibrad our Rockwell Meritor iyo waxaan ka heli doonaa qayb saxda ah ee la isugu gudbiyo gaari xamuul ah markii ugu horeysay ee. khubaro waxay leeyihiin in ka badan 100 sano oo khibrad ah marka la isku daro in industry ee. Waxaan markab karo gudbinta kasta in dal kasta, magaalo ka mid ah dunida oo dhan! Mid ka mid ah call waxa oo dhan sameeyo 877-776-4600 ama 407-872-1901!
Naga soo wac si aad u ogaato sababta aan waa mid ka mid ah distributors ugu weyn iyo dib-u-dhisaa of Rockwell Meritor idaacadaha dunida ballaaran. Waxaan leenahay boqolaal gudbinta diyaar u gudbinta caalamka oo maanta! bakhaarada lagu dhaansan la idaacadaha Rockwell dhab ah, dhab Rockwell idaacadaha qaybo, saa'idka, xirmooyinka seal, iyo geerka. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin line a full of qaybo aftermarket bedelka. Naga soo wac maanta oo arag sida iibka halyeeyga iyo adeegga shaqeyn karaan idiin. haddii cusub, dhisay, qaybo ka mid, ama xirmo aan waxa oo dhan waxay bixiyaan!
Waxaan la si guul leh bixinta xaaladaha kala iibsiga, idaacadaha, Farqiga calaamadaha, oo ulahooda wareejiya, PTO-iyo qaybo ka gaari xamuul ah oo dheeraad ah muddo ka badan 20 sano oo waxaad bixisaa hal sano waaran masaafada aan xad lahayn oo dhan idaacadaha dhisay aan iibiyo!